Maxaad ka taqaan shirkadda xaraasheysa shidaalka Soomaaliya? | Wardoon
Home Somali News Maxaad ka taqaan shirkadda xaraasheysa shidaalka Soomaaliya?
Maxaad ka taqaan shirkadda xaraasheysa shidaalka Soomaaliya?
Khamiista 7-da bishan Febraayo, waxaa hotel ku yaalla London ka furmi doona shirka xaraashka kheyraadka shidaal iyo gaas ee Soomaaliya. Haddaba yaa maalgalinaya shirkaasi?
Xilligan la kulmayo, ugu yaraan saddex toddobaad ayaa ka soo wareegatay “Shirkii Kheyraadka Shidaalka iyo Gaaska Soomaaliya ee lagu qabtay London 27-28 April 2015. Qabashada shirkaas waxaa maalgalinta ugu weyn (gold sponsor) iska lahaa shirkadda Schlumberger.
Waxaa lagu aas-aasay 1926 Faransiiska. Waxaana wada aas-aasay labo nin oo walaalo Faransiin ah: Conrad iyo Marcel Schlumberger. Tan iyo wixii markaa ka dambeeyay waxay ku faaftay adduunyada.
Maanta waxaa u shaqeeya 100,000 shaqaale ka badan oo ku kala sugan 140 waddan oo adduunka ka mid ah. Sannadkii 2016 ayaa daraasad qiimeyn dhaqaale oo ay sameysay Fortune Global ku tilmaantay shirkaddan Schlumberger shirkadda 287aad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Waxaa lagu qiyaasay in sannadkii ay hesho faa’iido dhan $48 billion (afartan iyo siddeed bilyan doolar).
Isla bishaas April 2015 ee shirka shidaalka Soomaaliya lagu qabanayo London, waxaa dalka Mareykanka lagu soo gaba-gabeeyay dacwad muddo socotay oo ka dhan ahayd Schlumberger. Waxaa lagu eedeeyay, laguna heley dembiyo la xariira ka dhuumasho canshuur, ka been sheegid qandaraasyo, marin habaabin hay’adaha canashuuraha dalka Mareykanka iyo in shaqaale Mareykan u dhashay ay dhex-gelisay qandaraasyo iyo macaamil lala yeeshay Iran iyo Sudan oo labaduba Mareykanka cunaqabateyn dhaqaale saaray.
Dukumintiyada maxkamadda la geeyey waxaa ku jiray kuwo caddeynaya sida Schlumberger ay u khiyaantay Mareykanka iyadoo shirkaddan magacyo been abuur ah u baxsatay Sudan iyo Iran. Tusaale marka shaqaalaha Schlumberger eek u sugan Sudan ay soo dalbanayaan lacago maalgelin ah ama qalab waxay qori jireen “Koonfurta Egypt” iyagoo Iran ula baxay “Waqooyiga Gacanka”. Ujeedaduna waxay ahayd inay ka dhuumato hay’adaha caddaaladda iyo kuwa maaliyadda ee la socodka cunaqabateynta Iran iyo Sudan.
Waaxda caddaaladda Mareykanka oo baaritaanka ka dhanka ah Schlumberger wadday ayaa ku soo gaba-gabeysay in shirkaddan lagu ganaaxo fal-dembiyeedkii ugu cuslaa ee shirkad ay gasho. Ugu dambeyntiina xukun maxkamadeed ayaa lagu gaaray in Schlumberger lagu ganaaxo $155 million (boqol konton iyo shan milyan) oo ah ganaax fal-dembiyeedkii ay gashay ah; iyo inay dib u soo guddo $77.5 million (toddobaatan iyo toddobo milyan iyo bar) oo ah faa’iidadii ay heshey muddadii ay beenta ku shaqeysaneysay Schlumberger.
LA SOCO QEYBTA 2-AAD, oo ay ku jito Schlumberger iyo kaalintii dagaalkii Ciraaq) Insha Allah
W?Q: Abdalle Ahmed Mumin
Afeef Wardoon masul kama ahan qofka kusaxiixan ayay gaar u tahay
Previous articleSAWIRO: Shacabka Muqdisho oo bilaabay inay iskood isaga qaadaan qashinka
Next articleDAAWO:-Hubka Ciidamada dowladda si qarsoodi ah ayaa loogu iibiyaa Suuqyada
DAAWO:-“NISA ayaa nagu soo weerartay garoonka muqdisho”